Khatarta dabka ee ku dhowaad dhammaan Isbaanishka waxay u dhaxeysaa aad iyo aad u sarreysa | Saadaasha Shabakadda
Heerkulka aadka u sarreeya ee jimcaha, Agoosto 18 ayaa ka careysnaa dalka intiisa badan, way kiciyeen Khatarta dabka "Aad u saraysa" ku dhowaad dhammaan dhulka qaranka, oo ay ku jiraan jasiiradaha. Kaliya qeybta xeebta ee Galicia ayaa ah halista hooseysa, iyo sidoo kale ku dhowaad dhammaan xeebta Cantabrian oo ay ku jiraan qayb weyn oo ka mid ah Asturias. Meelaha qaarkood ee Murcia iyo Alicante oo ku dhow xeebta khatartu waa mid dhexdhexaad ah.
Kuleylka daran ee mar labaad ku dhuftay dalka oo dhan ilaa shalay, ayaa dalka intiisa badan heegan geliyey. In kasta oo la filayo in heer kulku uu bilaabmi doono hoos u dhaca laga bilaabo berrito, digniinaha ayaa sii socon doona illaa xad. Jasiiradaha berri oo Sabti ah waxay sii wadi doonaan inay ku jiraan khatar sare, marka laga reebo meelaha qaar ee dhexdhexaadka ah ee Jasiiradaha Canary. Meelaha kale ee sii kashifaya ayaa noqon doona Andalusia, gobollada Valladolid, Segovia, Zaragoza, qayb ka mid ah Pyrenees ee Huesca iyo aagagga gobollada Ávila, Cuenca iyo Toledo. Galicia, dhanka kale, halista ayaa kusii kordheysa oo aad u sareysa.
Meelaha ugu halista badan
Khariidada halista dabka ee ay bixiso AEMET, Agoosto 18
Gobollada oo idil waxay ku jiraan khatar aad u daran dab inbadan dalka ka. Segovia, Soria, Guadalajara iyo qaybo badan oo ka mid ah Barcelona, ​​Zaragoza, Burgos, Valladolid iyo Ávila ayaa ka mid ah gobollada kooxda waqooyiga ee halista ugu badan leh. Laga soo bilaabo kooxda Sud, waxaan ka helnay qayb weyn oo ka mid ah Extremadura iyo gobolka Ciudad Real oo ku jira khatar aad u daran. Sidoo kale qaybo ka mid ah Andalusia, halkaas oo sidoo kale la filayo in berri qayb weyn oo bulshada ka mid ah ay ku sii socon doonto khatar aad u ba'an oo aad u sareysa.
Boortaqiiska ayaa shalay ku dhawaaqay xaalad musiibo guud ah qatarta dabka awgeed. Dalka, ka dib markii uu soo gaadhay dabkii ugu dambeeyay ee waxyeelada leh, wuxuu xitaa abaabulay ciidamada qalabka sida, oo ay ka mid yihiin xoogagga kale ee amniga sida booliska iyo dab-damiska, si ay ugu diyaar garoobaan dillaacyada suuragalka ah ee ka dhalan kara dhammaadka usbuuca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Khatarta dabka ee ku dhowaad dhammaan Isbaanishka waxay u dhexeysaa mid aad iyo aad u sarreeya